ZTE waxaa lagu qasbi karaa inay bedesho magaceeda si ay ugu laabato shaqadii | Androidsis
ZTE waxaa laga yaabaa inay bedesho magaceeda si ay uga shaqeyso Mareykanka
Opera saabuun ee ZTE ee dalka Mareykanka ayaan laheyn ujeedo ah inuu dhamaado waqti dhow. Shirkaddu waxay buuxisay dhammaan shuruudihii lagusoo rogay Mareykanka. Sidan oo kale, tallaabooyinkii ugu horreeyay ayaa loo qaaday shirkadda si ay ugu soo noqoto shaqadeedii caadiga ahayd. Waxay umuuqatay in dhamaadku mar dhow dhowyahay oo ay dhaqso ugu laaban doonaan howlahoodii caadiga ahaa.
Xanta ugu dambeysa ee soo socota waa mid wanaagsan, in kastoo aysan gabi ahaanba noqon karin. Tan iyo markii ay u muuqato in ZTE mar horeba aad ayey ugu dhowdahay inay ka shaqeyn karto Mareykanka. In kasta oo, ay u muuqato in tan awgeed, shirkaddu ay ku qasban tahay inay bedesho magaceeda.
Mid ka mid ah shuruudaha cusub ee laga sameeyay Mareykanka, ayaa ah in shirkaddu ay si cad u kala saareyso meheraddeeda. Sidan oo kale, hal dhinac waxay ku qasbanaan lahaayeen inay lahaadaan khadka ganacsiga mobilada iyo aaladaha kale ee macaamiisha. Labaduba si cad bay uqaybsameen.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa la filayaa in ZTE si loo dhiso koox maareyn madaxbanaan oo ka baxsan Shiinaha. Sababta ugu weyn ee tan ayaa ah kalsooni darada in ay jirto saameynta weyn ee dowladda Aasiya ku leedahay shirkadaha ka shaqeeya dalkooda.
Sidaa darteed, waxay u badan tahay in taleefannada ZTE ay ku imaan doonaan magac kale suuqa. Axon waa magaca umuuqda inuu helayo dhibco sharad. Laakiin ilaa iyo hadda ma jiro wax xaqiijin ah oo ka soo saaraha Shiinaha. Marka waa inaan sugnaa si aan wax badan uga ogaanno.
Waan arki doonaa sida ay sheekadan isu beddesho, taas oo umuuqata inaysan waligeed dhammaanayn. In kasta oo iftiinka dhamaadka tuneelku u muuqdo mid ka dhaw weligiis ZTE, Wali lama oga goorta ay si caadi ah ugu shaqeyn karaan markale suuqa. Waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan kaa maqalno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » ZTE » ZTE waxaa laga yaabaa inay bedesho magaceeda si ay uga shaqeyso Mareykanka
Mobilka ZTE ee hoos timaada magaca lambarka A0722 wuxuu helayaa shahaadada TENAA
Huawei P Smart +: oo ka cusub shirkadda oo leh afar kamaradood iyo Snapdragon 710